सक्षम खोज इन्जिन अनुकूलन विशेषज्ञहरू कसरी पत्ता लगाउँछन्?
ईकमर्स व्यवसाय मालिकहरू, वेबमास्टर्सहरू, वा नौसिखिया अनलाइन उद्यमीहरू - तिनीहरू सबैले एक मात्र लक्ष्यको वरिपरि केन्द्रित हुन्छन्।. तिनीहरूको प्राथमिक उद्देश्य खोजी इन्जिन परिणाम पृष्ठ (SERPs) को शीर्ष मा देख्न वेबसाइट छ. दुर्भाग्यवश, टाढा सबैले खोज इञ्जिन अनुकूलन (एसईओ) को एक साँच्चै परिष्कृत दायित्वबाट धेरै सजगता पाउन सक्दछन, ती प्रस्तुतिहरु लाई व्यावसायिक उद्योग सेवा नगर्ने, वा एक टीममा काम गर्ने, वा खोजी इन्जिन अनुकूलन विशेषज्ञहरुको पूर्ण-स्ट्याक एजेन्सी. यसैले हामीमध्ये अधिकांशले विषयलाई स्वामी बनाउने प्रयास गर्न अधिक सम्भव छ, यद्यपि यो धेरै श्रम-गहन र समय-उपभोग हुने कुनै पनि यो-आफै-आफै समाधानहरू. यसैले, हामी अंततः बिन्दुमा आउँदैछौं - स्पष्ट मूल्याङ्कनको साथ मात्र कुशल एसईओ सेवाहरूको आवश्यकतालाई विचार गरिरहेको छ, यहाँ केहि अनुभवी खोजी इन्जिन अनुकूलन विशेषज्ञहरु को भाडा को लागी एक ठूलो आवश्यकता उत्पन्न हुन्छ. तर इन्टरनेटमा सान्दर्भिक अफरहरूको त्यो भ्रममा कसरी भरोसायोग्य विशेषज्ञ वा कम्पनी पत्ता लगाउने? एक वास्तविक प्रो, एक कमजोर एसईओ प्रदायक, वा पनि स्क्यानरहरू को बीच मा सिर्फ एक खोज गर्न को लागि सिर्फ खोज इन्जिन अनुकूलन विशेषज्ञहरु को व्याख्या गर्ने? म निम्न प्रश्नहरू सोध्न विश्वास गर्दछु र उम्मेद्वारहरूले दिएका जवाफहरू देख्न को लागी को हो भनेर बुझ्न को एक राम्रो तरिका हुन सक्छ. त्यसोभए, आउनुहोस्.
एसईओ सल्लाहकारहरूलाई तपाईलाई उनीहरूको प्रशंसापत्र देखाउनको लागि आग्रह गर्नुहोस्।. ई. , उनको पूर्व र खडा ग्राहकहरूको सूची. वास्तविक खोजी इञ्जिन अप्टिमाइजेसन विशेषज्ञहरूले तपाईंलाई सम्पर्क जानकारीको साथ सबै आवश्यक जानकारी प्रदान गर्न हिचकिचाउँदैनन्. यसो गर्दा, यदि तपाइँ यस्तो एसईओ प्रदायक योग्य छ, वा यसको लागि केहि पनि चाँडै बाहिर जान सक्नुहुन्छ. तपाईले राम्रो खोजी श्रेणीमा कुनै पनि वास्तविक नतीजाहरूको लागि पहिलेका पूर्व परियोजनाहरूको मात्र जाँच गर्न सक्नुहुन्छ.
उनीहरूलाई सोध्नुहोस् कि उनीहरु तपाइँको SERP हरूको राम्रो रैंकिंगका लागि कार्य गर्न कसरी भइरहेको छ. एक सक्षम एसईओ प्राधिकरणले कहिल्यै पनि कहिल्यै पनि गहिरो, कुराकानी वा अन्वेषण अस्वीकार गर्दैन. तपाईं आफ्नो एसईओ को प्रयास संग आने वाला सटीक समय तालिका मा प्रदर्शित गर्न को लागी तपाईंको रैंकिंग प्रगति संग कदम चरण अन्त मा तपाईंको समग्र लक्ष्यहरु को बैठक को समयमा दिखाया जाना चाहिए.
कम्पनीको प्रस्तावमा समावेश गरिएको एक टेक्नोलोजी सर्वेक्षणमा तपाइँलाई तपाइँले प्रदान गरिसक्नु पर्दछ. यस्तो रिपोर्टले तपाईंको वेबसाइटको पल सामनाको लागि हरेक टेक्निकल समस्याको लागि एक टिप्पणी को आवरण गर्नु पर्दछ. मेरा मतलब तपाईं एकै पटकमा देखाइनु पर्छ कुन समस्याहरू, विशेष गरी, तपाईको साइटलाई पदोन्नति पदोन्नतिबाट रोक्न.
चेक इन ईन्जिन अनुकूलन विशेषज्ञहरू तपाईको वेबसाइट तथ्याङ्कहरू ट्रयाक गर्दैछन्. एकै समयमा, सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तिनीहरू प्रत्येक ग्राहक प्रत्यक्ष सीधा पहुँच वा कम से कम एक अनुसूचित साझेदारीको साझेदारी गर्दै, जो Google Analytics बाट सबै भन्दा राम्रो डेटासँग समर्थित छन्।.
र यहाँ हामी सबै भन्दा निर्णायक प्रश्नमा आउँदैछौ. केवल उनीहरूलाई सोध्नुहोस् यदि तिनीहरूले तपाईंलाई SERPS को शीर्ष मा प्रदर्शित गर्न को लागी ग्यारेन्टी दिन सक्छ, मैले मतलब खोज परिणाम को सूची मा स्थिति संख्या एक. के यो हो कि तपाईंले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिनुभएको छ, छोटो सूचनामा यस्तो "व्यावसायिक" छोड्न संकोच नगर्नुहोस्. वास्तविक खोजी इञ्जिन अप्टिमाइजेसेसन विशेषज्ञहरूले कहिलेकाहीँ ग्राहकले यस्तो बेकारलाई बताए. केवल बेपत्ता व्यक्तिहरू, वा अझ पनि खराब, स्क्यानरहरूलाई सरल र अनुभवहीन ग्राहकहरूमा धोखा गर्न जस्तै अभिनय गर्न सकिन्छ Source .